Isanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye ngumjikelezo wemveliso ejikelezayo edibanisa umgca wemveliso yesanti kunye nelayini yokuvelisa ilitye, enokuvelisa isanti kunye nelitye ngexesha elinye. Iseti epheleleyo yezixhobo zesanti kunye nelayini yelitye yemveliso yindibaniselwano yezixhobo ezijolise kwimveliso ...
1. Uyilo loYilo loqhekeza umgca wokwenza isanti Uyilo lweskim ikakhulu lubandakanya amanqanaba amathathu: uyilo lwenkqubo, uyilo loyilo lwenqwelomoya kunye noyilo lwezixhobo. Inkqubo yoyilo ye-1.1 Phantsi kwemeko yokuba iimfuno zenkqubo yokutya kunye nemveliso yokugqibela egqityiweyo icacile, inkqubo yenkqubo ...
Izixhobo zemihla ngemihla zokugcina isityumzi ziya kwenziwa kakuhle
Izixhobo zoomatshini zinomjikelo wobomi, kodwa lo mjikelo wobomi ukwachaphazeleka zizinto ezinkulu zabantu kwaye unefuthe kwindalo esingqongileyo. Kukwanjalo nakwizityumzi. Xa kuthelekiswa nemikhosi isityumzi, izincedisi isityumzi ngokubanzi iindawo ezincinane kunye naphakathi. Uninzi lwezi zixhobo ze-crusher ...